Kedu ihe bụ na otu ihe dị mkpa bụ okwu okwu | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ezie i nuru nke Jehova okwu. Ọ bụ alaka ụlọ ọrụ dị n’elu ala na-elekwasị anya n’ịmụ banyere etu ugwu siri guzobe na njimara ha nwere. A makwaara ya na otu alaka ụlọ ala nwere aha nke orology. Ọ bụ sayensị na-anwa inyocha ma mụọ etu ugwu, ugwu, na ugwu siri malite.
N’isiokwu a ị ga - achọta ozi niile ị chọrọ n ’ịkọwa okwu, ihe ọ na - amụ na etu o si dị mkpa.
1 Gini bu okwu okwu?
2 Ofdị okwu
3 Orography nke Europe
4 Orography nke Spain
Gini bu okwu okwu?
Asụsụ ahụ agbakwunyere n'ụzọ doro anya na ọmụmụ nke geomorphology nke mbara ala. Nke ahụ bụ ịsị, ejedeghi na njirimara nke elu nwere ike inwe, dị ka ọ dị n'ihe banyere ọdịdị ala. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmụ maka nhazi ugwu ma ọ bụ otu ugwu. A maara usoro a dị ka orogeny.
Ala a nke ihe odide ụwa na-ahụ maka ịkesa ụdị enyemaka ma ọ bụ ebe dị elu anyị na-ahụ n'akụkụ ụwa niile. Ọ bụghị naanị ụdị nke ihe enyemaka, kamakwa ụdị nke ihu ya nwere ike inweta, na-eburu n'uche ihe niile mpụga na-emetụta ya. Ọmụmụ ihe na-elekwasị anya n'ịkọwa ụdị ugwu niile anyị nwere ike ịhụ. Ugwu ọ bụla nwere usoro dị iche iche na nhazi ya na mgbanwe ya n'akụkọ ihe mere eme. A na-eme nchọpụta na nkọwa ndị a site na iji ihe osise eserese. N'ihi ihe nnọchianya ndị a, nke a maara nke ọma dị ka map, ọ ga-ekwe omume iji anya nke uche hụ ma mụtakwuo banyere ụdị enyemaka dị na mpaghara ụfọdụ.
Okwu okwu a nwere uzo di iche iche eji mara enyemaka. Anyị na-ahụ ụdị dị iche iche dịka ugwu, ugwu mgbawa, mbara ala na ndagwurugwu. Ọzọkwa, dabere na mpaghara ebe anyị nọ n'akụkụ oké osimiri, anyị nwere ike ịlele geomorphologies dị iche iche dị ka ọnụ mmiri na ụsọ mmiri. Okwu okwu a na-enye aka ikpebi ufodu uzo mmiri, udidi ha nwere (dika ihe meanders) na mophology nke onu ha.
Banyere mkpa ọ dị n'ịmụ asụsụ, anyị nwere ike ịchọpụta na ha dị oke mkpa maka ndị na-ahụ maka mbara ala na maka gọọmentị nke mba, ebe ha na-eje ozi iji mezuo ụzọ dị iche iche maka akụrụngwa na ọrụ okporo ụzọ. A na-amụrụ njirimara niile nke ala ahụ na ebumnuche nke inwe ike iwu ụlọ na ụzọ nkwukọrịta maka mgbasa na mmepe obodo. O nwekwara ọrụ dị mkpa n'ụwa nke ọrụ ugbo na igwu ala. Nke a bụ n'ihi na ị nwere ike ịme nyocha dị mkpa na njirimara nke ala na ala dị ebe ahụ iji mata ụdị ụdị akụ a ga-akụ. E wezụga nke ahụ, anyị nwere ike ịmara ma ọ bụrụ na mmiri dị n'okpuru ala na-ekele map ndị mepụtara eji mmuta okwu asusu.
Ihe a niile ghọrọ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ojiji na mmịpụta nke akụ sitere n'okike. Na mgbakwunye, ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ nweghị njikọ na ya, asụsụ okwu nwere mmetụta na ihu igwe na mgbanwe gburugburu ebe obibi na-eme n'ebe dị iche iche. Iji maa atụ, ihu igwe nwere ike ịdị na mpaghara ugwu (ma mmiri ozuzo na ọnọdụ okpomọkụ na ọchịchị ikuku) adịghị ka ọnọdụ ihu igwe nwere ike ịdị na mpaghara oke osimiri. Mmegharị nke igwe ikuku na-emetụta okwu a nke na-ewepụta usoro odide site na ịdị elu nke ugwu. Otu akụkụ dị oke mkpa bụ elu nke ugwu dị iche iche. Ugwu ndị a nwere ọrụ maka ịkwalite ọsọ nke ikuku.
Iji chịkọta ihe niile a, anyị nwere ike ikwu nke ahụ okwu okwu na-emetụta oke mmiri, igwe ojii na ifufe nwere ike ịdekọ na mpaghara enyere.
Orography nke Europe
Anyị nwere ike ịsị na Europe bụ otu n'ime kọntinenti na-enye otu n'ime mpaghara kachasị ukwuu nke okwu asụsụ. Nke a pụtara na enwere ụdị enyemaka dị iche iche na kọntinenti niile. Otu n'ime okwu okwu anyị nwere ike ịchọta anyị nwere:
Alps: A maara ya dị ka usoro asụsụ asụsụ kachasị mkpa na Western Europe niile
Apennines: usoro ugwu a nke ugwu Vesuvius, ugwu mgbawa Etna, dị na agwaetiti Sicily.
Na Europe anyị na-ahụkwa Ugwu di omimi na ugwu Scandinavia.
Ekebere ekewapụrụ n'etiti Europe na Eshia site na Ural ugwu.
Ugwu Caucasus. Ugwu ndị a dị n’agbata Osimiri Caspian na Oke Osimiri Ojii
Gburugburu mpaghara Europe niile, anyị nwere ugwu mgbawa, ala dị larịị na mbara ọzara. Enwekwara ọtụtụ ndagwurugwu, usoro osimiri na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mmadụ. N’etiti mbara ala kachasị mkpa anyị nwere ndagwurugwu Po, Ugwu North Europe na ndagwurugwu Russia.
Orography nke Spain
Ihe eji mara obodo anyi bu ihe nwere nnukwu ugwu. Usoro ndị a dị ọtụtụ ma kpuchie ọkara nke ókèala dum. Typedị enyemaka a ọnọdụ ihu igwe anyị nwere na Spen. Otu n'ime okwu okwu kachasị mkpa anyị nwere n'obodo anyị bụ:
Ndị Pyrenees. Usoro ugwu a na-ekewapụ Iberian Peninsula na France. Ọ nwere akụ na ụba nke ahịhịa na ahịhịa na ihu igwe dịka enyemaka si dị.
Usoro Betic. Ha bụ ugwu ndị kachasị elu.
Ugwu ugwu Cantabrica.
Usoro East Iberian
Archipelagos, Balearic Islands na Canary Islands
N'ihi eziokwu ahụ bụ na mmiri mmiri dị iche iche na-asa Spain, anyị na-ahụ ọtụtụ osimiri, ọnụ ọnụ ugwu na osimiri. Oke Osimiri Atlantic, Oke Osimiri Cantabrian na Oke Osimiri Mediterenian gbara mpaghara Iberian Peninsula gburugburu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, okwu okwu nke mbara ala dị ezigbo mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata enyemaka. Na mgbakwunye, ọtụtụ njirimara ihu igwe nke mpaghara na-ekpebisi ike nke ọma site na ntụgharị asụsụ ya. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere okwu ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Gịnị bụ orography